Kedu otu ị ga-esi gụọ calorie maka ndị mbido? - Ihe Oriri
Isi > Ihe Oriri > Otu esi amalite ịgụ calorie - ịchọta ihe ngwọta
Kedu otu ị ga-esi gụọ calorie maka ndị mbido?
Olee otúgụọ caloriena usoro 3 dị mfe
Kpebie ihe mgbaru ọsọ gị. Họrọ ma ịchọrọ ịba, felata ma ọ bụ jigide ibu ga-enye gị kwa ụbọchịkaloriihe mgbaru ọsọ ịchọta maka nke a bụ nzọụkwụ mbụna-agụta calorie.
Kwadebe nri gị ma debe akwụkwọ (jiri ngwa)
Tụlee nri gị &akaraọganihu gị.
Jenụwarị 8 2018 Nov.
Anyị na-anụ banyere calorie oge niile. Calorie ole dị na bisiki a? Mmadu ole ka nkpuru nkpu 100 na-awuli elu gbapuru, ha gbara oso ma o bu fidgeting? Ma gịnị bụ calorie na ole n'ime ha ka anyị chọrọ n'ezie? Caloria bu otu uzo eji eme ka aru aru ghara idi ike. Akike ziri ezi na-ebili mgbe anyị na-etinye ume dị ka ike gwụ anyị.
Ọ bụrụ na anyị na-enye ike anyị mgbe niile na ike karịa ka anyị na-ere ọkụ, a ga-eji nwayọọ nwayọọ chekwaa abụba na sel anyị ma anyị ga-ebu ibu. Ọ bụrụ n’anyị ga-enwete ume karịa ka anyị ga - eji mejupụta, anyị ga - efulata. Ya mere, anyị kwesịrị inwe ike iji ike ejiri akụrụngwa akpọ calorie.
Olimpiksmụ nwanyị na-agba ịnyịnya
A na-akọwa kalori, ụdị anyị na-atụle na nri, nke a na-akpọkwa nnukwu calorie, dị ka ike a ga-achọ iji bulie okpomọkụ otu kilogram mmiri site n'otu ogo Celsius. Ihe niile anyị na-eri nwere kalori. otu ike nke ihe ahụ na-echekwa na njikọ njikọta ya.
Onu ahia Pizza nwere calorie 272, iberi achicha nwere ihe dika calorie 78, na apụl nwere ihe dị ka calorie 52. A na-ewepụta ike a n'oge mgbaze ma chekwaa ya na ụmụ irighiri ihe ndị ọzọ enwere ike imebi iji nye ume mgbe ahụ chọrọ ya Pzọ: gburugburu 10% na-enyere mgbaze, ihe dịka 20% na-akwalite mmega ahụ, akụkụ kachasị, gburugburu 70%, na-akwado ọrụ dị mkpa nke akụkụ ahụ anyị na anụ ahụ anyị. Uzo nke ato a bu onodu ogwu gi, otutu kalori i gha adi ndu ma oburu na irighi ma obu megharia.
Tinye na mgbatị na mgbaze ma ị ga-abanye na ntuziaka gọọmentị maka ịkọ calorie mmadụ kwa ụbọchị: 2000 maka ụmụ nwanyị na 2500 maka ụmụ nwoke. Atụmatụ ndị a dabere na ihe ndị dị ka ịdị arọ dị arọ, mmega ahụ, na akwara ahụ. Nke ahụ ọ pụtara na onye ọ bụla kwesịrị iri ihe dị ka calorie 2000? Ọ bụchaghị.
Mgbe ị na-arụ ọrụ agụụ na-agụsi ike dị ka ịgba ịnyịnya ígwè na Tour de France, ahụ gị nwere ike iji calorie 9,000 kwa ụbọchị. Ime ime na-ewere calorie dị ntakịrị karịa ka ọ dị na mbụ, ndị agadi na-enwekarị ọgwụ mgbochi. A na-eji nwayọ ọkụ ọkụ ka ọ na-eji obere.
Nke a bụ ihe ọzọ ị kwesịrị ịma tupu ịmalite ịgụ calorie. Gụọ calorie na aha nri na-atụle ike nri nwere, ọ bụghị ike ole ị nwere nwere ike irite na ya. Nri dị elu dị ka celery na ọka niile chọrọ ume ike ịgbari, yabụ na ị ga-eji obere ike na 100 kalori na-eje ozi nke celery karịa kalori 100 nke nduku.
Hapụ ikwu eziokwu na ụfọdụ nri nwere nri ndị dị ka protein na vitamin, ebe ndị ọzọ na-enye uru dị oke mkpa. Ọ bụrụ na i rie ọtụtụ n’ime nri ndị a, ị nwere ike ibubiga oke oke na nri na-edozi ahụ nke mmadụ dị iche iche nwere ike ha agaghị enweta otu kalori ahụ. Ọdịiche dị iche iche dị ka enzyme, eriri afọ, na ọbụna ogologo afọ pụtara na ikike onye ọ bụla ịgbasa iji nweta calorie site na nri dịtụ iche.
Kalori bu ihe bara uru nke ike, mana iji choro imata onye obula n’ime anyi choro, anyi kwesiri itule ihe dika mmega aru, udi nri, na ike nke aru anyi.
Kedu ka m ga-esi gbakọọ kalori m?
Ijichọpụtangụkọta gị kwa ụbọchịkalorichọrọ, mụbaa BMR gị site na ihe omume kwesịrị ekwesị, dị ka ndị a:
Ọ bụrụ n ’ịnọ otu ebe:Calorie-Nkekọta = BMR x 1.2.
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ nke ọma (mmega ahụ ọkụ / egwuregwu 1-3 ụbọchị / izu):Calorie-Nkekọta = BMR x 1.375.
Kedu ihe bụ ụmụ okorobịa! Carlo Macapinlac si na NewbieFitnessAcademy.com. M na-enyere ndị ọkachamara na-arụsi ọrụ ike iru ihe mgbaru ọsọ ha na-efu ka ha wee nwee obi ike karị, dịrị njikere maka ọnọdụ ọ bụla, ma nweta ọtụtụ n'ime ndụ ha.
N’isiokwu a, a ga m egosi gị otu esi agbakọ kalori ụbọchị gị. Ekwuru m, nke a nwere ike bụrụ otu n’ime igodo imelata ibu. Ikwesiri ima nọmba a.
Gaghị enwe ike ịmepụta nri gị kpamkpam. Agbalịrị m ya, ọ na-arụ ọrụ, ọ naghị arụ ọrụ, ịchọpụta ihe oriri caloric m kwa ụbọchị bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa m mụtara na-achọpụta ụdị nri m na-eri, ma maa ihe, ọ dugara ụfọdụ nsonazụ mara mma maka m nakwa ugbu a maka ụmụ akwụkwọ m niile. Ma ọ bụrụ na ị rapara na njedebe nke isiokwu a, m ga-enye gị usoro site na ntinye otu ụkpụrụ m si nweta nsonaazụ ndị a.
Na tupu anyị amalite, pịa bọtịnụ ịdenye aha oge ọ bụla ị ga-amara gị ọkwa mgbe m biputere isiokwu ọhụrụ kwa izu. Ka anyị dive n'ime. Ọ dị mma, lee anyị.
Yabụ ịchọrọ ịmalite na Multipl, tinye ahụ gị na pound n'etiti 9 na 14. Ọ bụrụ na ị bụ nwoke nwere ọrụ ọfịs, ị na-amalite n'etiti etiti n'etiti 10 na 12. Ọ bụrụ na ị na-arụsi ọrụ ike ma na-emega ahụ mgbe niile, mgbe ahụ ị nọ n'ọnọdụ dị elu n'etiti 12 na 14.
Maara gịnị? Ka m gosi gị ụzọ dị mfe. Aga m ewebata gị otu n'ime ihe ndị kachasị ike enwere mgbe ọ na-agbakọ nri caloric gị kwa ụbọchị na-enweghị isi. Ọ bụ ngwa mkpanaka a na-akpọ MyFitnessunes.
Ọ dịghị achọ ka e nwee ngụkọta oge ma ọ bụ mgbakọ na mwepụ dị mgbagwoju anya. Ihe ị ga - eme bụ ibudata ngwa ahụ, debanye aha, nye ụfọdụ ozi gbasara onwe gị na myfitnesspal ga - enye gị calorie gị kwa ụbọchị nke a na mbụ, m ga - ekwukwa ya ọzọ, kalori deficit bụ otu n’ime igodo imelata ibu. Nwere ike iri ihe ọ bụla dị mma, m ga-etinye okwu ndị ahụ dị mma, na nri na-edozi ahụ na mbara ala ebe a na nke ahụ dị mkpa, mana ọ bụrụ na ị gabiga ya ma ọ na-eduga na calorie buru ibu, ị gaghị arafucha, m kwere gị nkwa.
I nwedịrị ike iri ọtụtụ akwụkwọ nri. Karịsịa mgbe ọ bụ starchy. Ama m nke oma? Echere m ileba anya na nri ndị a.
Odikwa nnoo ka obi uto. Mana ọ pụtaghị na ọ baara gị uru. Can'tnweghị ike ịgbanahụ nri ọjọọ.
Nke ahụ abụghị otu o si arụ ọrụ. Echere m, nke a abụghị sayensị roket, nri? Yabụ ebe a, m ga-awụlitere n'azụ ihuenyo iPhone m, ị ga-akọwa usoro iji Myfitnesspal iji gbakọọ ihe oriri calorie gị kwa ụbọchị. Ọ dị mma, lee anyị.
Ya mere, onye isi, o doro anya na ebe a, ị ga-ebudata ngwa ahụ. Usoro a bụ otu, site n'ụzọ, ma ị nwere gam akporo ma ọ bụ IOS. Ya mere pụọ Gaa na ngwa nchekwa ugbu a, pịa bọtịnụ ọchụchọ na akụkụ aka nri ala, pịa igbe ọchụchọ ma pịnye na MyFitnessunes, pịgharịa gaa ntakịrị na ebe ọ dị.
Mgbe ahụ kụrụ 'Get', naanị mee obere nkwenye na ngwa ahụ ga-amalite nbudata. Ozugbo ibudatara ya, pịa na ngwa ahụ iji mepee ya. Myfitnesspal nwere ike bụrụ otu n’ime ngwaọrụ kachasị ike mgbe ọ gbadara ya iji debe calorie na macros gị.
Ọ na-enyekwa gị nri caloric kwa ụbọchị. Ihe kachasị mma bụ na ọ bụ n'efu. Ha nwere ụdị ngwa a kwụrụ ụgwọ n'ezie, mana anyị agaghị echegbu onwe anyị banyere nke ahụ.
Dị nweere onwe ya karịrị nke ọma iji nweta ọrụ ahụ. Lee, ị nweghị ike ijikwa ihe ị na-enweghị ike ịtụ. Ọ bụrụ na ịnweghị ịdekọ ihe ị na-eri ma nọrọ n'okpuru nri caloric gị kwa ụbọchị, nri gị ga-abụ egwuregwu ịkọ nkọ ka ị nwee ike banye maka akaụntụ ọhụrụ ma ọ bụ debanye aha ma ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ.
Maka edemede a, anyị ga-eme ka à ga - asị na ị na - eji ngwa ahụ eme ihe na nke mbụ, yabụ anyị pịa 'Banye'. elu 'm ga-ejegharị gị site na usoro ndị a site na nkwụsị. Kwesighi ịme ihe ọ bụla mgbe ị debanyere aha maka ngwa ahụ, mana ịkwesịrị ịkọwa dịka o kwere mee mgbe ị na-enye ozi nkeonwe gị ka anyị gafee nke a.
Can nwere ike ịbanye na email ma ọ bụ jiri akaụntụ Facebook gị. Ka anyị malite site na fir fir nhọrọ ebe a. Ọzọ, ngwa ahụ jụrụ gị maka ebumnuche ahụike gị.
Ana m eche na ịchọrọ ịkwụsị ibu ebe a, yabụ ka ịhọrọ nhọrọ mbụ. Na-esote, họrọ ọkwa ọrụ gị. Anọ m n'ụkwụ m ọtụtụ ka m wee gaa 'n'ọrụ'.
Iri caloric gị kwa ụbọchị ga-adabere na ya. Naanị họrọ nke kachasị dabara n'ọnọdụ gị ugbu a. Nwere ike ịgbanwe nke a mgbe emechara.
Na-esote, ị ga-ahọrọ okike gị, ụbọchị ọmụmụ gị na ebe obibi gị. Ya mere, ka anyị nọgide na-aga. Ọ dị mma, mgbe ịmechara, pịa akụ dị n'akụkụ aka nri aka nri.
Aga m edepụta ịdị elu gị, ibu gị ugbu a na ibu ibu gị. Nke a nwere ike ịbụ ọrịre n’eziokwu maka ụfọdụ ndị, ọkachasị ma ọ bụrụ na i tobebeghị onwe gị n’oge. Ma hey, ị ga-amalite ebe.
Ziri ezi? Naanị ngwangwa dị ebe a, iji nweta oke ibu gị, ịchọrọ ijide n'aka na ihe mbụ n'ụtụtụ mgbe ị gachara azụmaahịa na ime ụlọ ịwụ, ịchọrọ ịtụle onwe gị na afọ efu kpamkpam. Ozo, O doro anya na Captain, achoghi akpukpo uzo. Ọ bụrụ na ịnweghị otu aka ugbu a na ị ga - agbaso isiokwu a, ị nwere ike ịkọ nkọ ole ị ga - ebu ma gbanwee ya ka emechara wee nwee ọkwa.
Yak idọhọ ke odobi kilogram 170. Ọzọ anyị na-ahọrọ anyị lekwasịrị arọ. Kwuo na ịchọrọ ịhapụ 10 pound.
Ya mere, anyị ga-ezipụta 160. Na-esote, họrọ ihe mgbaru ọsọ gị kwa izu. Ọ dị gị n'aka ike ị chọrọ ịnọ na nke a.
Ka ị na-emekwu ihe ike, obere kalori ịchọrọ iri nri ụbọchị ahụ. Ya mere mara nke ahụ. Ọ na-amasịkarị m ịga ije na paụnd akwadoro kwa izu ma ọ bụrụ na ịchọrọ iwe iwe karịa ị nwere ike ịga ọkara.
Ka anyị leba anya n’ihe na-agbanwe ihe mgbaru ọsọ gị kwa izu na-eme ka calorie gị ghara ịdị, ka ị wee nwee ike ịmata ihe ị ga-achọ na ihe ị ga-atụ anya kụrụ obere ntụpọ atọ ahụ n'akụkụ aka nri ala, merie ihe mgbaru ọsọ ma nwee oge m debere ya na ndabara nke otu paụnd kwa izu ma ka anyị lelee obere kalori gị. Yabụ ugbu a ọ bụ calorie 2,070, nke na-adịghị njọ. Nwere ike maa dabara a otutu nri a kalori mmefu ego.
Ọ dị mma ugbu a ka anyị hụ ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ị gbanwee ya na 1.5 lbs n’izu, kụọ ya, wee kụọ ya ọzọ, ma ebe ahụ ị ga - aga, ọ gbanwere calorie 1,820, nke bụ ihe ijuanya na ọ bụghị obere. Ọ dị mma ugbu a ka anyị hụ ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ị na - eme ihe ike na ya, ka anyị kwuo na ị ga - aga Mexico n'ime izu abụọ ma ị ka na - ejide ahụ gị, anaghị m akwado ya n'agbanyeghị, mana m chọrọ na i nwere echiche nke ihe okuku dieting dị ka.
Chei, hapu okwu n’isiokwu a ma oburu n’itinyela nri iberibe ma gwa m ihe omuma gi na ya. Ọ dị mma ka anyị setịpụ ihe mgbaru ọsọ anyị kwa izu na kilogram abụọ kwa izu ka anyị laghachi na nri anyị na nke ahụ na-enye anyị nnukwu calorie 1,570. Nke ahụ abụghị ọtụtụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ echiche zuru oke nke ihe a yiri, lee ihe atụ ole na ole. Ogwe dị n’elu ugwu nke dị ka ebe ike na-ere ebe a na North America nwere calorie 250. Ọ bụrụ n ’ibi na kalori 1,500, ị nwere ike iri isii n’ime ụlọ mmanya ndị a ụbọchị.
Ma ọ bụ a McDonald si Big Mac na fries na cola na abụọ n'elu ugwu Ogwe. Ghọtara isi. Ma ọ bụ ya.
Nke ahụ niile. Nke ahụ bụ ihe ị nwetara Ọtụtụ ndị mmadụ na-eri ihe a n'otu oge, ị ga-ejedebe ikuku ikuku maka nri abalị. Otu ihe edetu ikpeazụ ebe a, ndị a bụkwa ebe ọrụ ọrụ gị gbanwere ma ga-emetụta uru calorie gị wee hụ na ị ga-ahọrọ nke kwesịrị ekwesị nke kachasị ọnọdụ gị ugbu a.
Odi nma, ka anyi mechaa ndebanye aha gi ebe a, ị na-enye nke gi Mgbe i mechara, ikwesiri imepe email gi ma nyochaa njirimara gi. Ma mgbe ịmechara ihe ahụ niile, ịnwere ike iji ozi nbanye gị wee banye na ibe a. Nke a bụ ndepụta ụlọ gị.Azọ dị ngwa ịdebanye aha bụ ịbanye na akaụntụ Facebook gị naanị.
Kedu ụzọ ọ bụla ọ si arụ ọrụ. Ugbu a, ba na ozi nkeonwe m nyere MyFitnessunes mgbe m debanyere aha, enwere m calorie puku abụọ na narị abụọ na iri atọ iji rie ụbọchị niile. Nke a bụ ihe m kalori ụbọchị kwa ụbọchị oriri maka abụba ọnwụ.
Nọmba gị nwere ike ịdị iche. O nwere ike ịbụ karịa ma ọ bụ obere. Ihe obula obu, chee na onu ogugu dika ego nri gi.
Ọ bụ oriri caloric gị kwa ụbọchị. Kedu ka nke ahụ dị mfe karịa iji aka aka ya? Ọ na-ewe naanị ole na ole iji gbanwee nọmba gị na MyFitnessunes ga-elekọta ndị ọzọ. Ọrụ gị bụ ịnọ naanị nọmba ahụ mgbe ọ bụla ịchọrọ ida abụba.
Nke ahụ pụtara, ọ bụrụ na ị fụọ ego calorie gị niile maka nri ehihie maka na ị gweriri pizza dum, mgbe ahụ ihe ọ bụla ị ga-eri n'elu nke ahụ ị ga-enweta njupụta calorie. Nke nwere ike ịbụ ihe niile ị ga - eme bụ ị drinkụ mmiri ma hie ụra maka nri abalị. Know maara ihe m na-ekwu? Yabụ ị ga-abụ onye nwere uche.
Ikekwe ị nwere ike ịnweta iberi ma ọ bụ abụọ ka ị nwee ike ibi obere. Nwere ike maa dabara na gị kwa ụbọchị kalori oriri mmefu ego. Ọrụ gị bụ itinye nri gị niile n'ụbọchị ma dị ka ekwuru ya, nọrọ n'okpuru nri caloric kwa ụbọchị m ga-enwe njikọ na njedebe nke isiokwu ahụ na otu n'ime nkuzi m na otu n'ime nkuzi m banyere otu esi eji myfitnesspal ka soro gị macros ma ọ bụrụ na ị chọrọ a ọzọ zuru ezu nkọwa na ya, karịsịa mgbe ọ na-abịa ịdenye gị nri maka kalori oriri abụba ọnwụ.
Mara mma dị mfe? Ajụjụ na-esote mgbe ahụ bụ kedu otu ị ga-esi tinye ozi a niile iji nwee nghọta ma nweta nsonaazụ? Iji nyere gị aka na nke a na-esote, ọ ga-amasị m izitere gị otu Lean Body Blueprint n'efu. Nke a bụ otú m si gbazee abụba niile dị n'akụkụ afọ m wee gbanwee ya na ngwugwu isii na-enweghị nri nzuzu ma ọ bụ igbu oge na mgbatị ahụ. Ọ bụ usoro usoro 4 dị mfe emere maka ndị ọkachamara na-arụsi ọrụ ike na ọ bụ otu ụkpụrụ ahụ m na-akụziri ụmụ akwụkwọ m niile na-ahụ maka onwe ha ma ha ahụla nsonaazụ dị ịtụnanya.
A ga-enwe njikọ na mpaghara nkọwa. Naanị pịa ya, tinye email gị ma m ga-ezitere gị ya ozugbo, nke ahụ bụ ihe niile m nwere. Nọrọ nke ukwuu, nye isiokwu a isi mkpịsị aka ma ọ bụrụ na ị masịrị ya, biko denye aha na ọwa m, ọ bụrụ na ịnweghị.
Ana m etinye edemede ọhụrụ kwa izu. Na hey, ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ịbanye na MyFitnessPal, hapụ m ajụjụ na ngalaba nkọwa m ga-eme ike m niile ịza gị. Ọ dị mma, hụ gị na ngalaba nkọwa.
Virtual High ise!
Calorisa ọ bara uru?
Caloriena-agụtabụ ngwa ọrụ ụfọdụ nwere ike ịba uru.Na-agụta calorienwere ike inyere gị aka felata site n’inye gị nkọwa gbasara ihe ị na-eri kwa ụbọchị. Nke a nwere ike inyere gị aka ịchọpụta usoro iri nri iji gbanwee, na-echekwa gị n'ụzọ iji ruo ebumnuche gị.Ọkt 1 2019
Ego ole ka m ga-eri iri calorie 1000 kwa ụbọchị?
Gịhapụ ibu ibumgbe aru gi na-epelata akakalorikarịa ka ọ na-ere ọkụ. Na-ebelata mkpokọta gịkalorisite na 500 kaCalorie 1,000makaụbọchị gaghọọ aibu ibuọnwụ ọnwụ nke otu na pound abụọ n’izu. Gbado anya na nri, ọ bụghịkalori.
ka anyi ghara ime ya, umu okorobia nabata ozo na umi m ga eri nri n'ihi na enwere m mmetuta na a na m eri otutu nri ubochi a ma achoro m inwe ike ichota ihe m na eri kwa ubochi Ana m eji ngwa a akpọ 'enyi m ahụike' nke m ji tupu oke mana anaghị m eji ya eme oge niile yabụ m na-eji ngwa ahụ, ọ tụgharịrị na ọ bụ ihe dị ka calorie 2,700 ruo 3,000 kwa ụbọchị anaghị m eri nri mgbe niile n'ihi na ' enwere m agụụ na-agụ, mana n'ihi na oge ụfọdụ, m na-agwụ ike ma anaghị m eme egwuregwu, n'ihi na ụbọchị ndị a na ọrịa a na-efe efe enweghi ọtụtụ ohere iji mega ahụ yana m na-arụsi ọrụ ike. calorie m na-eri na gburugburu 1200 kalori kwa ụbọchị naanị iji hụ ihe ga-eme, m ga-ejedebe ebe adịkwa site na paụnd ma ọ bụ abụọ ọ bụla maka otu izu Izu, a Ya mere, echere m na anyị ga-ahụ ma ọ bụrụ na nke ahụ ziri ezi na ole Enwere m ike idafu, mana yana ahụike dị m mgbe iri nri a ma ọ bụrụ na ọ ga-adigide ma ọ bụ na ọ bụghị naanị na eserese eserese, mana ọ baghị uru na ọ gafeela b n'ihi na ọ nweghị ihe dị iche iji nweta ya mana ọ nweghị ihe dị iche mana ọ nweghị ihe dị iche ma echere m banyere jack na jillon akụkọ ifo oh jack ga-eso ya gbadaa ugwu dị nro mana ọ nweghị ihe dị iche hey na ọbụlagodi na ihe niile dị ka ọ bụ na isi m, ọ bụghị otu akụkọ ga-esi kwụsị ka ọ ghara ime ihe ọ bụla dị iche amaara m na ọ dịghị ihe ọ bụla ọ bụla m chọrọ ị drinkụ tii ginger na-ekpo ọkụ mana enwere m ihe dị ka calorie 160 ugbu a, n'ihi na iko kwa ụbọchị ginger tii nwere 70 calorie n'ezie kama enwere m ike ịnwe naanị otu n'ime swiiti ndị ahụ ginger si Trader Joe, ee, mana ọ nweghị ihe dị iche na ngwongwo ndị e ji esi nri, n'ihi ya, m chọpụtara na ụnyaahụ iforgotto na-edekọ àkwá abụọ ahụ gụnyere maka nri abalị wee gbaa 131 calorie ọkụ karịa karịa calorie 1200, nke ọma, ee, echere m na m ga-akpachapụ anya na m nọ taa anaghị atụ oyi ma dekọọ ihe niile m riri. agụụ na-agụ m ụnyaahụ m na-eche ruo nanị mgbe etiti abalị ga-arụ ọrụ na akwụkwọ m ga - arụ ọrụ na amaghị m etu ọ dị ma ọ bụ na anaghị m eri nri ụbọchị niile ma ọ bụ na m ga - eri nri abalị n'isi ụtụtụ naanị na ị maara na enweghị calorie zuru ezu ekpe maka abalị ahụ, nke ahụ bụ isiokwu ya, yabụ taa anyị ga-ahụ otu o si adị m ka ọ dị m ka ndị hụrụ m n'anya n'oge ochie dabara na mkpuchi m, ezinụlọ m anaghị ata ahụhụ ndị nzuzu ha maara, anyị susuo ọnụ wee nwụọ n'ihe ndina iji wee daa jụụ, anyị na-adị nzuzu ma emesịa n'ihi na elere m anya nke ọma, mgbe m hụrụ onye nlekọta na-ekwughi na m bụ onye amamihe mana abụ m ezinụlọ m? anaghị ata ahụhụ, anyị na-eche efu mgbe e mesịrị n'ihi na m chọrọ ihe miri emi, ee m chọrọ ihe ị na-egosi, na m na-asị na m a amamihe, ma m maara ihe iji mara na m bara uru ọ Na-alụ dị ka ị bụ karama ọgwụ agaghị m emepe ma amatala m otu ọ ga-esi bụrụ obere okwu, mana ọ bụ nnukwu ihe maka m ọzọ, mmetụta m dị oke ọsọ, enweghị m ike ịnụ ụtọ, m nwere ike Anaghị emeghe egwuregwu ahụ, enweghị m ike imeghe ya, m na-atụgharị mgbe m na-enweghị ike iru ya ka m kwaga n'ihi na m nwere uwe zuru oke mana achọghị m iyi ya ọ gwụla ma ị dọwara ya Oge ụfọdụ m na-ewe iwe wee kwuo ihe ọ gwụla ma ịnwere ike ịnwale mgbe ahụ enwere m ya. Ana m eri ahụ, ị ​​bụ omume m, ọkara nke ọzọ. Enweghị m okwu ahụ, mana enwere m uwe zuru oke, mana anaghị m ' t na-eyi ya belụsọ na ụfọdụ anyị enweghị ike ịme ka etemeete ahụ sie ike ma ana m eche ma ọ masịrị gị mana ọ bụrụ na ịlaghachi azụ anyị nwere ike ịme ya yabụ nke a bụ echiche ikpeazụ m banyere nri calorie 1200 yabụ echere m na ọnụọgụgụ na-adigide, ee m ga-asị na ị maara enwere m ike ime ya karịa otu izu, enwere m ike ịme ya, echere m na ọ bara uru na anaghị m agụ gị agụụ, ọbụlagodi na agụụ na-agụ gị site n'oge ruo n'oge n'oge Um, ị ka bụ gị mara otu esi enweta nri na-edozi ahụ ịchọrọ na echere m na ụnwụ nri ntakịrị m na-enwe nwere ike ịbụ n'ihi enweghị nri na-edozi ahụ yana mgbe m nwetara ụfọdụ calorie na-adịghị mma na ndị ka mma Na-agbanwe calorie na iri mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri nke a nwere ike bụrụ ezigbo ezigbo nri, mana m ga-edebe ya? Goga na nri a, ee, nke ahụ bụ n'ihi na echere m na ịdebe calorie bụ nnukwu oge na ọ na-ewe ọtụtụ nraranye nke m na-enweghị n'ezie, mana ị maara na echere m na m nwere ike ịrụ ọrụ maka gị mgbe ịchọtara onwe gi na-eri otutu nri, uh andum maka ndi na eri oke nri ma ha adighi acho ya.
Echere m na iri nri calorie 1200 kwa ụbọchị nwere ike inyere gị aka ịkwụsị ibu ma eleghị anya ọ ga-enwe ike ibu ibu ruo ogologo oge. Otú ọ dị, m ga-ekwu na echere m na metabolism gị na-enweta ihe ụfọdụ, echeghị m ogologo oge ị ga-eri nri calorie 1200 ka ị ga-enwekwu ibu karịa na ahụ gị ga-emesị nweta ọhụrụ calorie count, Ọ dị ihe dị ka ụbọchị atọ kemgbe m kwụsịrị nri m chọrọ ịsị na enwetala m obere ntakịrị, yabụ ugbu a, m laghachiri ihe dịka kilogram 54.4, yabụ m ga-asị na ọ bụrụ ọ bụrụ na ịrapagidesi ike na nri a ị ga - emecha nweta ngwa ngwa ngwa ngwa ma ị gụchaa nri ị na - eme gị, echeghị na ị nwere mmetụta dị ukwuu amaara m na ị na - eme ka m,
Ego ole ka calorie ị na-ere n’ọkụ n’ụbọchị n’enweghị mgbatị ahụ?
N'ezie, otu nnyocha chọpụtara na ikwenye ma ọ bụ ndị ọzọ na-mmega ahụngagharị (nke bụ ihe a na-ahụkarị n’etiti anụ ahụ karịa ndị buru ibu) nwere ikeọkụruru 350kalorikaụbọchị.
Restaurantslọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ na-agha ụgha banyere calorie?
FDA na-enyeụlọ oriri na ọ restaurantsụ .ụleeway: Enweghị iwu banyere olekaloriedepụtara na menu nwere ike ịdị iche na ihe dị na nri n'ezie - naanị ha kwesịrị ịbụ 'ndị nwere ezi uche.' Ọtụtụ n'imeụlọ oriri na ọ restaurantsụ .ụkwuo na ha na-agbakọkaloriọnụ dabere na nkezi.Ọkt 11 2017
M ga-efufu ma ọ bụrụ na m kwụsị ịgụ calorie?
Ọ bụrụnọmba nkekaloriiri nri anaghị emetụta ọnọdụ gị…Calorie na-agụtajikwaa gịibu ibunwere ike ịrụrụ gị ọrụ. Ọtụtụ ọmụmụ na-egosi naịgụ kaloribụ ụzọ dị irè ijihapụ ibu ibu. Nke ahụ ziri ezi, ọ nwere ike ịrụ ọrụ mgbe ị na-arụsi ọrụ ikena-agụta caloriemaka obere oge.Sep 20 2020
Calorie 800 ọ dị otu ụbọchị dị mma?
Ke adianade do, na-ewe dị ole na ole kaKalori 800 kwa ụbọchịnwere ike ọ gaghị enye gị ike ị chọrọ makakwa ụbọchịibi ndụ na mmega ahụ oge niile, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-eri otu ụdị nri ọ bụlaụbọchị. Gwa dọkịta gị ma ọ bụ dibịa nri iji hụ na ị nwetara nri ị chọrọ mgbe ị nọ ala-kalori nri.16.11.2020
Kedu otu m ga - esi gbaa calorie 1000 otu ụbọchị?
Ma ọ bụrụ na i rie ole na olekalorinaọkụỌzọkalorisite na mmega ahụ, gịidaibu ibu. Ke ofụri ofụri, ọ bụrụ na ị bee 500 kaCalori 1,000 kwa ụbọchịsite na ụdị nri gị, ị gaidaihe dị ka paụnd 1 (kilogram 0.5) n’izu. Ọ dị mfe.Dec. 8 2020
Kedu usoro iwu 5 20?
Na5/20 iwunri na-edozi ahụ nwere ike inye aka duzie ndị ahịa ịzụ ahịa mgbe ị na-ele akwụkwọ nyocha. Ọ na-egosi na ọnụọgụ 20% ma ọ bụ karịa kwa ụbọchị nke ihe oriri ọ bụla bụ nnukwu ego, ebe 5% ma ọ bụ obere dị ala. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwalite potassium gị, chọọ ma ọ dịkarịa ala uru 20% kwa ụbọchị.Sep 9 2020
Restaurantslọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ eleda calorie anya?
Ndị nnyocha ahụ chọpụtara na ndị mmadụ n'otu n'otueleda anyaihekaloriọdịnaya nke nri ejiriụlọ oriri na ọ restaurantsụ .ụha na-ahụ dị ka ahụike, na ogo nke nwere ike ibute uru dị mfe.Sep 14 2007
Kedu ụzọ kachasị mma iji gụọ calorie?
O doro anya, ọnụ ọgụgụ ahụ ga-adịgasị iche dabere na ngwa na ụdị ị na-eji, mana nke a bụ ezigbo ụzọ, ụzọ dị mfe iji bido na nri calorie na-agụta nri! Chọrọ ịdekọ nri gị na calorie ole ị na-eri kwa ụbọchị?
I kwesịrị ịma kalori ole ị ga-eji felata?
Mgbe ị chọpụtachara calorie ole ị ga-eri kwa ụbọchị iji ruo oke ibu gị, mana tupu ị banye n'ime ịgụta calorie, ịkwesịrị ịchọpụta ọnụọgụ calorie ị na-eri kwa ụbọchị. Nke a bụ ihe dị oke mkpa. M na-akpọ nke a nri overhaul.
Gini mere odi m ka ike calorie ghari?
N'oge njem calorie na-agụta gị, ị nwere ike ịda mbà mgbe ị na-abanye nri ndị ahụ na-edoghị anya, ma ọ bụ ị nwere ike ịnwe ụbọchị ezumike nke na-eme ka ịchọrọ ịkwụsị nsuso kpamkpam. Iji nyere aka, nke a bụ ụfọdụ ndụmọdụ ga-atụ anya na ịgụta calorie na-arụ ọrụ maka gị n'ụzọ agaghị eme gị ara: 1. SET A REALISTIC CALORIE GOAL